वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्रजंग पिटर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नजिकबाट नियाल्ने मध्ये एक हुन् । ४ दशक लामो कम्युनिष्ट राजनीतिमा पिटर उत्तिकै सक्रिय छन् । जनयुद्ध, शान्तियुद्ध र मनोयुद्धको अभ्यासकर्ता तथा अनुभवकर्ता समेत भएको उनी बताउँछन् । मिडिया मार्फत हरेक राजनीतिक घटनालाई खरो टिप्पणीगर्ने पिटरका नजरमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट जन्मिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’ को भावी कार्यदिशा, जनअपेक्षा र मुलुकको अब राजनीतिक गन्तव्य कस्तो होला ? यिनै विषयमाथि केन्द्रित भएर अमरवाणीका संवाददाता रमेश दवाडीले पिटरसँग गरेको कुराकानीमा आधारित यो आलेखः
म नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ४० वर्षदेखि सक्रिय छु । कम्युनिष्ट आन्दोलनका सबै आरोह–अवरोहको अपनत्व महशुस गर्ने हेक्का राख्छु । म त्यस्तो कम्युनिष्ट कार्यकर्ता हुँ जुनसुकै आन्दोलन तथा कार्यक्रमलाई उत्तिकै सम्मान गर्छु । प्रत्येक आन्दोलनको उतार–चढाव र घुम्ती मोडमा यात्रा गरेको यात्री हुँ । जनयुद्ध, शान्तियुद्ध, मनोयुद्धको अभ्यासकर्ता, द्रष्टा, भोक्तामात्र नभई कर्ता पनि भएकाले जेठ ३ गते नेकपा एमाले–नेकपा माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता विषयलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएँ । कम्युनिष्ट पार्टीमात्रै होइन, हरेक राजनीतिक शक्तिबीच एउटा उद्देश्य लागि एकता हुनु स्वागत योग्य छ । तर, त्यस्तो एकतामा व्यक्तिगत स्वार्थ हाभी भयो भने त्यो एकदमै हानिकारक हुनजान्छ । जेठ ३ गते जन्मिएको नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी बीचको एकता हो वा दुई ठूला राजनीतिक दलहरूको एकता हो ? यो प्रश्न चिह्न छ ।
संसदीय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने चिन्तन संख्या हुन्छ । त्यहाँ संख्याको जोड–घटाऊको राजनीति हुन्छ । जुन अत्यन्त फोहोरी पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ । सांसद किनबेच हुने जस्ता काण्ड निम्त्याउने खेल यो व्यवस्थामा दोहोरिन्छन् । यो व्यवस्थाले भीडको जनमतलाई आफ्नो पक्षमा राख्न पाउँछ । अहिले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाको एकीकरण कम्युनिष्टबीचको एकीकरण नभई संसदीय राजनीतिको सत्ताप्राप्तिका लागि गरिएको एकतामात्र हो । यसमा संसदीय मूल्यमान्यता र त्यसले निदृष्ट गरेका विषय समकालीन राजनीतिको आवश्यकता पूर्ति गर्न दुई शक्तिबीचमा अङ्क गणितीय खेलका आधारमा यो एकता भएको हो । यसले लामो यात्रा गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन् ।
हरेक राजनीतिक पार्टी वा समूहको निश्चित विधि, सिद्धान्त, उद्देश्य र लक्ष्य हुन्छ । फुटबलमा जतिसुकै फोवार्ड खेलाडी ‘डिफेन्स’मा खेले पनि अन्तिम लक्ष्य भनेको गोल गर्नु हो । सबै राजनीतिक पार्टीको उद्देश्य ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए’ भन्ने नै हुन्छ । तर, त्यसका लागि प्रमुख कुरा के हो भने सत्ता प्राप्ति र सत्ताको नेतृत्व सबभन्दा ठूलो हुन्छ । त्यो प्राप्तिका विधि र सैद्धान्तिक आधारहरू हुन्छन् । तर,म के देख्दछु भने कुन सिद्धान्तको र कुन विचारको आधारमा टेकेर के का लागि एकता गर्दैछौँ भन्ने स्पष्टता अहिलेको एकतामा छैन् । त्यसकारणले यो एकीकरण सिद्धान्तको लासमा टेकेर सुविधा भोगका लागि सत्ताप्राप्ति गर्न गरिएको प्रयोग मात्र हो । अब यस्तो कच्चा यात्रा कति दीर्घकालीन बन्ला यो सबैले अनुमान गर्न सक्छन् । यसरी सिद्धान्तको लासमा टेकेको पार्टीले जनभावना अनुकूल काम गर्छ जस्तो लाग्दैन् । लासको न सास हुन्छ न त आश ।
उस्तै तर विपरित धुव्रको मिलन
२०२५ सालदेखि अलग धारको एउटा नदी अहिले फेरि मिसिएको छ । ०२८ सालको झापा विद्रोहको नेतृत्व पूर्व एमालेको गरेको थियो । त्यतिबेला ०२८ सालमै केन्द्रीय कारागारमा केन्द्रीय ‘न्यूक्लियस्’ भन्ने एउटा संगठन बनेको थियो । त्यतिबेला देखि नै दुवै धार स्पष्ट तरिकाले अलग थिए । अझ, झापा विद्रोहबाट ‘को–नेशन केन्द्र’ हुँदै माले गठन गर्दा पहिलो जनमत संङ्ग्रहमा अझै स्पष्ट दुई धार भएको देखिन्छ ।
बहुदललाई स्वीकार्ने कि नस्वीकारर्ने विषयमा विवाद भयो । त्यस पछाडि जाँदा हाम्रो जस्तो देशमा जहिल्यै पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विदेशी कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रभावहरू र त्यसको असर यहाँ पर्दछन् । चीनमा आएको माओको मृत्यु पछाडि साँस्कृतिक क्रान्तिलाई कसरी हेर्ने त भन्दा त्यहाँ फेरि मौलिक रूपमा तत्कालीन माले र माओवादी मूलधारको चौंथो महाधिवेशन बीचमा भिन्नता आयो । ४० को दशकमा चुनावको उपयोग गरेर तत्कालीन एमालेले जान्छ र चुनाव वहिष्कार गरेर अघि वढ्छ चौंथो महाधिवेशनबाट मसाल बनेको माओवादी केन्द्रीय धार ।
०४६ सालमै आउँदा पनि संसदीय व्यवस्थालाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा यी दुईपार्टीको बीचमा भिन्नता हुन्छ । एउटा बहुदलीय जनवादको वकालत गर्छ अर्को सशस्त्र संघर्षको बाटो रोज्न पुग्छ । जसको परिणाम १० वर्षे जनयुद्धबाट १५ हजार वढी मानिसको ज्यान गयो अर्बोको भौतिक सम्पत्ति खेर गयो । संसदीय व्यवस्थाले जनता कुनैपनि हालतमा जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन भन्ने माओवादी धार । दुबै धारबीच दशकौं तिक्तता रह्यो । कम्युनिष्ट पार्टीकै नाममा रहँदा पनि दुइटा अलग्गै ब्रान्ड भएर रहे । यो दुनियाँ जगजायर छ । अहिले माओवादी आन्दोलनको मूलधार कमजोर बन्दै गयो । यसमा त्यहि शक्तिभित्रको टुटफुट पनि कारक होला । पार्टीभित्र गुटको ठूलै समस्या प¥यो । त्यसपछि एकता गर्नेपर्ने बाध्यता भयो । दुबै पार्टीभित्र गुटको राजनीति यत्ति भद्दा देखियो कि एकले अर्काको नेतृत्व न स्वीकार्ने न त कन्ट्रोल नै गर्न नसक्ने अवस्थामा आयो ।
बाहिर त्यति नआएपनि भित्र त्यस्तो आगो सल्किएको अवस्था थियो । स्थानीय चुनावको बेलामा रौतहट जिल्लामा माधव नेपाललाई निस्तेज गर्नुपर्छ भन्ने केपी ओलीको गुट सक्रिय देखियो भने झापामा केपी ओली विरुद्धमा माधवको गुट उस्तै भूमिकामा उभिएको देखियो । त्यस्तै अन्य वर्गीय संगठनहरूमा पनि त्यो खालको मतान्तर हाभी बन्दै गएको अवस्था थियो । यस्तै अवस्था समस्याको सिकार बनेको थियो माओवादी । हिजोका दिनमा माओवादी पार्टीभित्रमा गुटैगुटको पार्टी जस्तो थियो त्यसलाई चरम रूपमा विद्यार्थी राष्ट्रिय सम्मेलनमा देखियो । यस्तो गुटको दवाब र राजनीतिक नेतृत्वहरूमा भयो अरूसँग नमिल्दाखेरी आफ्नो हैसियत नै गुम्नेजस्तो भूमिका देखियो । यो सिद्धान्तहीनता र गुट राजनीतिको आतङ्क भित्तामा ठेलिएको नेतृत्वहरूलाई चुत्थ्यो विकल्प पार्टी एकता बन्न पुग्यो । अब एकीकरणपछि ती गुट नित्सतेज होलान् वा अझै वढ्लान रु यसको जवाफ भावी समयले नै दिनेछ ।
कांग्रेस र कम्युनिष्ट एउटै
नेपालका दुई ठूला पार्टीको मिलनलाई कम्युष्टि एकताका रूपमा कदापी व्यख्या गर्न सकिदैन् । यो एकता डिफ्याक्टको कम्युनिष्टहरूको बीचमा नभई डिजुरे कम्युनिष्टबीचमा भएको एकता हो । त्यसो हुँदा कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा त विषयमै नजाऊँ । संसदीय राजनीतिको नेतृत्व गर्छ यो एकताले । संसदीय राजनीति अङ्क गणितीय खेलमा हुने हुँदा सत्ताको नेतृत्वको कुरा पनि यसको स्वार्थमा जोडिन्छ । यो डिजुरे कम्युनिष्ट हो । डिफ्याक्टको कम्युनिष्ट होइन । शीतयुद्धमा जसरी कम्युनिष्टसँग आतंकित हुन्छ संसार त्यस्तै तरिकाले कम्युनिष्ट नभइकन पनि ‘कम्युनिष्ट’ शब्दसँग जुन आतंकित भएको छ त्यसको मूलमर्ममा गएको छैन् । अब के हाम्रो देशको कार्यकारी प्रमुखहरू विभिन्न तरिकाले धर्मकर्ममा, स्वर्ग–नर्कका विषयमा विश्वास गरिराखेका छन् । अब पार्टी कमिटीलाई चुस्तदुरुस्त र नीतिगत रूपबाट अगाडि बढाएका छैनन् । उनीहरूको दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू, आइएनजिओ, विश्व बैंकहरूको धारणा क्लियर छैन् । साम्राज्यवाद विरुद्ध मोर्चामा लडिरहेका देशहरूप्रति एक्यबद्धता छैन् । मानवतावाद अलिकति पनि प्रकट गर्न परेको छैन् भनेदेखि यो नाम मात्रैको कम्युनिष्ट हो । झण्डा राख्ने वित्तिकै ‘जय नेपाल’ र ‘लाल सलाम’ भन्ने वित्तिकै कुनै पार्टीहरू त छुट्टिने अवस्था छैन् । उनीहरूको नीति, विधि र कार्यकर्ता र चरित्रहरूमा देखिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा मलाई लाग्छ, डिजुरे कम्युनिष्टहरू हुन् । कम्युनिष्टबाट कोही पनि आतंकित नभए हुन्छ । कम्युनिष्टको कभरमा रहेको नवउदारवादी शासन व्यवस्था अहिलेको व्यवस्था हो । यो कम्युनिष्ट पार्टीको नाम निकाल्ने बित्तिकै नेपाली काँग्रेस जस्तै हुन्छ । नाममा फरक होला तर व्यवहार उही काँग्रेसकै जस्तो छ । व्यक्ति फरक हुन सक्छन्, बोलीका शब्दहरू फरक हुन सक्छन् तर आचरणमा, उद्देश्यमा र लक्ष्यमा फरक छ ।
एकीकरणका सुन्दर पक्ष
जति नै गाली गरे पनि यो एकताका केही राम्रा र सुन्दर पक्ष पनि छन् । नेपालमा एउटा त कम्युनिष्ट सरकार बन्न नै नदिने पुरानै रोग हो । सरकार बनेपनि त्यसले पूरा कार्यकाल सरकार चलाएको उदाहरण छैन । ००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालको कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । तर, केपी ओलीको सरकार अहिले पूर्ण सुरक्षित छ यदि बीचमा गुटको बखेडा नआए । त्यसअर्थमा यो गठबन्धन ऐतिहासिक छ । नेतृत्वले मुलुकको विकास गर्न चाह्यो भने साँच्चै दुरगामी सोचका साथ विकास गर्न समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि पहल गर्न सक्छ ।
बाह्य शक्तिको साथ
नेपाली राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपको विषयमा मेरो विश्लेषण पहिलो पटक फेल खायो । मैले पार्टी एकता हुँदैन भनेर सोचेको थिएँ । तर, एकता भयो । यसका लागि मैले ३/४ ओटा आधार राखेको थिएँ । एउटा आधार, हाम्रो जस्तो भू–संवेदनशील राजनीतिक भू–भागमा जहिले पनि ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्छन् । यसमा विदेशीहरूको हात रहने गर्छ र रहँदै पनि आएको छ । सिंहदरबारको सूक्ष्म व्यवस्थापन पनि बाह्य शक्तिले गर्दै आएको छ भनेर आरोप लागिरहेको बेलामा बाह्य हस्तक्षेप नहुने कुरै भएन । योभन्दा बढी म बोल्दिनँ । यस विषयमा मौन रहन उचित ठान्छु ।
राजनीतिक ज्योतिष नै त बन्न मन छैन मलाइ । तर, म के भन्छु भने नेकपाको केन्द्रीय कमिटी ४४१ जना बनाउँदा जुन मानकको आधारमा त्यो बन्यो यसले जहाँजको दुर्घटना लक्षण देखाइसकेको छ । संसारमा नभएको राजनीतिक अभ्यास एशियाकै शक्तिशाली पार्टी नेकपाले गरेको छ । एकैपार्टीमा दुई जनाको नेतृत्व हुन सक्दैन । यसले गुटको सुरक्षा र अस्तित्व पार्टीमा देखिन्छ । अर्को कुरा, कमिटी प्रणलीमा जुन त्यो कमिटी बन्दैन । नेताहरू त्यसमा शासकको हैसियतमा हुन्छन् । कमिटी ल्याप्चे किनारामा सदर भनेर लगाउने हैसियतको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गुटको बोलवाला अझै वढ्छ र पार्टी नेतृत्वमा संकट आइपर्छ । चिन्ता जनयुद्धको मुद्दाको इतिहासलाई सम्झँदा आक्रोश, घृणा, उत्तेजना र केही भन्नपर्ने अवस्थाहरू त आउँछ । जनयुद्धको मूल स्पीड भनेको धर्म निरपेक्षता र संघीयता होइन ।
समानता, स्वाभिमानता र उत्पादन प्रणाली अनुसारमा मानिसका जनजीविकाका सवाल प्रमुख थिए । परिवर्तनको अनुभूत गरिब झुपडीमा ल्याउने एजेण्डा थियो । धर्म निरपेक्षताको प्रश्न छ, राज्यसित त सर्वविधितै कुरा हो, त्यो कम्युनिष्ट नै बन्नुपर्ने, माओवादी नै बन्नुपर्ने स्थिति छैन् । यी चारै वटा कम्युनिष्टको नारामात्रै हो । जनयुद्धले उठाएका सामान्य विषयहरूको पनि नेकपाले समाधान गर्ने बाटोतर्फ त उन्मुख भएको हामी देख्छौँ तर त्यसको पहल र त्यसको अगुवाइहरू भएको थिएन र यसमा पनि छैन् । अहिले समाजवादको विषयमा सरकारले अथवा आफ्नो घोषणापत्रमा सबैतिर नोट गरेको छ । तर,त्यसको कार्यान्वयन ठिक विपरित छ । हुने खाने र हुँदा खाने बीचको लडाईँको खाडलमा अहिले पनि वास्तविक जनता पिल्सिएको अवस्था छ ।
प्रकाशित १७ जेठ २0७५ , बिहिबार | 2018-05-31 03:25:23